Carmen Mola: wake trilogy. Tsvaga iyo Spanish Elena Ferrante | Zvazvino Zvinyorwa
Wati wambonzwa nezveCarmen Mola uye trilogy yake? Unoziva here kuti ndiani munyori uyu? Kunyangwe aine mabhuku mashoma kwazvo pamusika, bhuku rake rekutanga rakabudirira, asi ndiani munyori?
Kana iwe uchida ziva zvakawanda nezvaCarmen Mola, trilogy yake uye kumwe kuda kuziva kwake, usamire kuverenga izvo zvatichazokuudza nezvazvo.
1 Carmen Mola ndiani?
1.1 Mumashoko aCarmen Mola
2 Ceni yaCarmen Mola
3 Carmen Mola: yake trilogy
3.1 Mwenga wechiGypsy
3.2 Mambure epepuru
Carmen Mola ndiani?
Chinhu chekutanga chaunofanira kuziva nezvaCarmen Mola ndechekuti iro zita harisi rechokwadi, asi izita rekunyepedzera. Iye munyori chaiye aida, nenzira iyi, kuchengetedza hupenyu hwake chaihwo parutivi nehunyanzvi, ndosaka vashoma vanhu vanoziva munyori. Kwete izvozvo chete, asi zvakare haape akawanda mabvunzurudzo ega kuyedza kuchengetedza kuzivikanwa kwake. Zvisinei, kubudirira kweruzivo rwake rwekutanga, kuchiteverwa nemamwe maviri ari chikamu chetatu, kwakaita kuti vanhu vazhinji vamutsvage.
Kubva pane izvo zvinozivikanwa nezvemunyori, Carmen Mola akaberekerwa muMadrid. Zvinozivikanwa kuti iye munhu anoda kushanda, uye mhuri yake. Asi zvakare chengetedza kusazivikanwa kusvika pakukwirira, ndosaka akatsvaga zita rekunyepedzera kuti aburitse mabasa ake.
La yekutanga novel yaakaburitsa akadaro muna 2018 uye ibhuku rekutanga rematatu. Gore rakatevera akaburitsa chikamu chechipiri apo, muna 2020, akaburitsa chikamu chechitatu. Zvinoenderana nedata rekutengesa, Carmen Mola akatengesa anopfuura mazana mazana maviri nemakumi mashanu emakopi, akashandurwa mumitauro gumi neimwe.
Uye zvakare, uye chakabudirira kwazvo kumunyori, inyaya yekuti Diagonal TV neViacom International Studios vakacherekedza trilogy uye vakasaina kontrakiti yekuchinjisa kune iyo huru skrini.
Nehurombo, hapachina rumwe ruzivo nezve munyori, hazvizivikanwe kana ari mukadzi chaiye, kana murume. Hapana kushambadzira kana zviitiko zvekushambadzira zvemabasa ake zvakarongeka, asi zvese zvinofamba kuburikidza nehukama pasocial network uye pasina kuratidza kuti munyori ndiani (kuisa chiso pairi).
Mumashoko aCarmen Mola
Mukubvunzana kwe Maria Fasce muZenda munyori iye- kana munyori- akapindura mubvunzo iwoyo.
-Nei uchihwanda kuseri kwemanyepo?
-Chaizvoizvo, kune zvikonzero zvakawanda zvekuti handinzwisise kuti sei vamwe vanyori vasingadaro. Kutanga, ndinofunga chinhu chakakosha inyaya, kwete kuti ndiani akanyora. Musiyano upi zvaunoita kana ari mukadzi murefu, akanaka kana mupfupi, akashata murume? Chandaida ndechekuti vanhu vaverenge nyaya yevanasikana vechiGypsy uye mupurisa anofarira kuimba rwiyo rweMina Mazzini aiferefeta kufa kwavo. Asi ini ndakati kune zvikonzero zvakawanda. Ndiyo rondedzero yangu yekutanga uye zvinoreva kuti ndinozvipira kuita hunyanzvi kune chimwe chinhu.
Ini ndaisada kuti vandinoshanda navo, shamwari dzangu, vanatezvara vangu kana amai vangu vazive kuti zvakaitika kwandiri kuti ndinyore nezvemumwe munhu anouraya mukadzi wechidiki nekuboora maburi mudehenya rake kuti aise maruva ehonye agare akatarisa kuti ivo vari kudya huropi ... Ivo havanganzwisise, kune avo vese ini ndiri akajairika ... Kune zvakawanda. Ko kana iyo novel yaive yakundikana zvachose? Aifanira kuzvitsanangura uye ainyara. Uye, pane kudaro, dai kwaive kubudirira kunoshamisa? Pamwe ndakamanikidzwa kuchinja hupenyu hwangu, chinova chinhu chandisinganzwe senge, ndinogutsikana nezvangu ... ndinogona kufunga nezvezvimwe zvikonzero, ndine chokwadi.
Ceni yaCarmen Mola
Kana uchisimudzira Carmen Mola, imwe yeiyo kusimbiswa kukuru ndiye aive iye aive «Spanish Elena Ferrante». Chaizvoizvo, kana kunyorwa kweumwe neumwe kuchiongororwa, vazhinji vanofunga kuti vanopokana. Ivo vakasiyana zvachose munzira yekurondedzera. Zvino, maererano neyakajairika fomu yenyaya yekuparwa kwemhosva, tinogona kutaura kuti yakafanana chaizvo.
Uye ndeyekuti Carmen Mola ndiye akananga kwazvo mukutaura kwake, zvekuti zviitiko zvinotaurwa munhau dzake zvakashata, zvinotyisa uye nehutsinye kuti zvingakutorere iwe kuramba uchiverenga. Kwaari, huipi huripo mumabhuku ake uye anohupa nenzira ine hutsinye uye noutsinye, pasina kuchenjera. Izvo zvakashata zvakaipa.
Zvakare, zvinoratidza izvozvo akaongorora mapurisa epamusoro sezvo ruzivo rwake rwekuti runoshanda sei chaizvo, pamwe nekuvandudzwa kwekuferefeta, kwe "hunyengeri" hwekudzivirira kuti nyaya irege kuvharwa ...
Chimwe chiitiko ku kumira kunze kwepeni raCarmen Mola ndiyo nzira iyo inoita kuti tizive vatambi "vakaipa". Mune mamwe mazwi, zvinopinda mupfungwa dzevadzivisi, kana vechipiri vanopikisa, kutiita kuti tiwane hunhu hwakamonyoroka, huipi hwakachena, hutsinye ... Muchokwadi, yemabhuku matatu, pamwe ndiyo yekupedzisira inokusiya uine kunzwa padhuze neyakaipisisa uipi.
Isu tinoziva nezvaCarmen Mola trilogy yake, nekuti parizvino ndiwo mabhuku aakaburitsa kusvika parizvino. Nekudaro, isu tinoziva kuti haizove yega, kunyanya nekubudirira kwairehwa nehutatu.
Naizvozvo, isu tinoda kukuudza nezve rimwe nerimwe remabhuku kuitira kuti iwe uzive zvishoma nezve izvo zvaari.
Gypsy Mwenga ndiro bhuku rekutanga mune trilogy. Mariri iwe unowana iyo nyaya yakafanana zvikuru neiyo yenyaya yematsotsi. Asi paunenge uchienderera mberi, unoona kuti pane chimwe chinhu. Uye ndezvekuti pachinzvimbo chekuuraya, iwe unenge uine maviri acho, ane hukama kune mumwe nemumwe apo hunhu hukuru hunofanirwa kujekesa chokwadi.
Chinhu chakanaka pamusoro penyaya iyi ndechekuti kunyora kunoita kuti muverengi atore chikamu mune chakavanzika icho, nekuti zvinomushandura kuita mutikitivha, zvishoma nezvishoma achizvikwenya nekukwesha kuitira kuti akwanise kuziva kuti zvichapera sei.
Mushure meGypsy Mwenga, mu2019 kwakauya Iyo Purple Network, chikamu chechipiri chetatu patinopfuurira nehunhu hukuru hwatakatosangana nahwo mubhuku rekutanga. Nekudaro, kure nekutizivisa kune inotonhora uye yakavharika hunhu, zvinoenda kudurura kanhu kemunhu akahwanda mariri. Mune mamwe mazwi, zvinoita kuti iwe utange kuziva kuti nei akadaro, nei achizvibata nenzira iyoyo.
Uye nekuda kweizvi, nyaya yaanopa inoshungurudza: kutsakatika kwemwanakomana we protagonist. Naizvozvo, iwe haungogone kuwana chete yakavanzika uye ine hunhu mufananidzo weye inspector, asiwo yaamai vanokwanisa kuita chero chavanogona kuti vawane mwanakomana wavo, kunyangwe kana ichiganhurana nepamutemo uye ichiisa hupenyu hwavo panjodzi (uye nezvevamwe.
Bhuku rekupedzisira mune trilogy yaCarmen Mola rakaburitswa mu2020 uye parizvino rave riri rimwe remabhuku akanakisa aakanyora. Uye zvakare, pane yakajeka shanduko yemunhu wechikadzi, Inspector Elena Blanco.
Kunyangwe mubhuku repiri akatitaridza hunhu hwevanhu, mune ino nyaya yechitatu anoramba achiwedzera icho chinhu. Ndokunge, kutsvaga humanize hunhu hwekunzwira tsitsi muverengi. Mune ino kesi, chakavanzika chiri kuzenge chiri kutsvaga shamwari isipo.
Ehezve, iwe uchawana yakanyanya kunanga, mbishi, kana kunyange inotyisa nhoroondo. Mhedziso yechokwadi mukuenderana neyekuparwa nhoroondo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Carmen Mola: yake trilogy